Tag: statistika fampiasana finday | Martech Zone
Tag: statistikan'ny fampiasana finday
Statistika 9 momba ny fiantraikan'ny traikefan'ny mpampiasa finday
Talata, May 31, 2016 Talata, May 31, 2016 Douglas Karr
Efa nanao fikarohana momba ny tranonkalanao tao amin'ny Google ve ianao ary nahita ny mari-pamantarana Mobile-Friendly eo aminy? Google dia manana pejy fitsapana mora raikitra amin'ny finday aza ahafahanao mijery olana amin'ny tranokalanao. Fitsapana tsara dia tsara ity izay mamakafaka ireo singa ary manome antoka fa tsara toerana sy hita maso izy ireo. Ny finday-namana anefa tsy voatsara amin'ny finday. Ny sori-dalana fotsiny izany ary tsy mijery ny fihetsiky ny mpampiasa finday tena misy anao